October 27, 2019 - Myitter
ဆည်အတွင်း ရေမှတ်တိုင်အနီး ဆယ်လ်ဖီဆွဲရာမှ ရေထဲလျှောကျပြီး ရေနစ်သေဆုံးမှုဖြစ်ပွား
October 27, 2019 Myitter 0
တောင်တွင်းကြီးမြို့နယ် ကင်ပွန်းတောင်ရွာအနီး ကင်ပွန်းတောင်ဆည်တွင် အောက်တိုဘာ ၂ရရက်နေ့ နေ့လယ် ၁နာရီခွဲ အချိန်ခန့်က အလုပ်ပိတ်ရက် အလည်ရောက်လာသောလူငယ်များမှ အသက်၁၈နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးတစ်ဦးသည် ဆည်အတွင်း ရေမှတ်တိုင်အနီး ဆယ်လ်ဖီဆွဲရာမှ ရေထဲလျှောကျပြီး ရေနစ်သေဆုံးမှုဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းသိရသည်။ တောင်တွင်းကြီးမြို့ ပုလဲ(၁)အရောင်းဆိုင်မှ အရောင်းစာရေးများဖြစ်ကြသော မောင်ဖြိုးမောင်မောင်၊ မောင်ရဲသူဇော်၊ မောင်ခန့် စည်သူအောင်၊ မောင်ဇင်ကိုမောင်၊ မောင်လှိုင်ဖုန်းကို၊ […]
ဒီကနေ့ (၂၇. ၁၀. ၂၀၁၉) မနက်ပိုင်းက ရန်ကုန်မြို့ ကမာရွတ်မြို့နယ် Grand Hanthar Hospital တွင် ဆေးကုသမှုခံယူနေသော မိုးလေဝသနှင့် ဇလဗေဒ ပညာရှင် ဒေါက်တာ ဦးထွန်းလွင်ထံသို့ ရန်ကုန်တိုင်း ဝန်ကြီးချုပ် ဦးဖြိုးမင်းသိန်းမှ သွားရောက် တွေ့ဆုံ အားပေးစကားများပြောကြားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ ဒေါက်တာ […]
ဖေ့ဘုတ်သုံးတာ ဒီလိုပို့စ်မျိုး တွေကြောင့် ဘေလ်ကုန်ရကျိုးနပ် နေတာပါ….
“မျက်ရည်ခိုင် ရင်တော့ ဖတ်ကြည့်စေချင်တယ်” လင်မယား စုံတွဲ တစ်တွဲပါလာတဲ့ သင်္ဘောတစ်စင်း နစ်မြှုပ်သွားတယ် အချိန်တော်တော်ကြာမှ အသက်ကယ်လှေတစ်စင်း ရောက်လာတယ် ။ အသက်ကယ်လှေပေါ်မှာ နေရာဆိုလို့ တစ်နေရာဘဲ ကျန်တော့တယ် ။ အဲဒီအချိန်မှာ ယောက်ျားဖြစ် သူက သူ့မိန်းမ ကိုသူ့အနောက် ဆွဲချလိုက်ပြီး သူကိုယ်တိုင် အသက်ကယ်လှေပေါ်ခုံတက်လိုက်တယ် […]
မွေးနေ့မှာ ဖခင်ကို သိန်း ၁၀၀၀ ကန်တော့ပြီး အရမ်းကို ပီတိဖြစ်နေတဲ့ အထူးကုဆရာဝန်လေး
Zawgyi မွေးနေ့မှာ ဖခင်ကို သိန်း ၁၀၀၀ ကန်တော့ပြီး အရမ်းကို ပီတိဖြစ်နေတဲ့ မန္တလေးက အထူးကုဆရာဝန်လေး အောင်သီဟ မွေးနေ့မှာ အဖေ့ကို သိန်း ၁၀၀၀ ပုံပြီးကန်တော့တဲ့ မန္တလေးက အလှအပဆိုင်ရာ အထူးကု ဆရာဝန်လေး အောင်သီဟရဲ့ ပို့စ်ကို ပြန်လည် ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။ အထူးကုဆရာဝန်လေးဟာ […]
လူပိန်ချင်တာမျိုး မဟုတ်ပဲ ဗိုက်ခေါက် အဆီ၊ ခါးဆီ၊ ကျောဆီလို အဆီပိုတွေပဲ ကျချင်တယ်ဆိုသူများ အတွက် ဆေးနည်းကောင်းလေး အချိန်မကုန် လွယ်ကူ သက်သာတဲ့ နည်းလမ်းဖြစ်ပေမယ့် နည်းလမ်းမှန်မှန်နဲ့ တော့ ဇွဲရှိရှိ လုပ်ရပါမယ် ပါဝင်ပစ္စည်းများကတော့ သံပုရာသီး တစ်လုံးဂျင်း လက် တစ်ဆစ်ခန့်နဲ […]
နာရီဝက် အတွင်းမှာပဲ ရှဲသူ ထောင်ချီသောင်းချီရောက်သွားတဲ့ MC Kayar Lay နဲ့ Rap Kyarkyiတို့ရဲ့ ယုန်လေးလုပ်ပေးခဲ့တဲ့ မိုးရေထဲမှာပဲ MTV
နာရီဝက် အတွင်းမှာပဲ ရှဲသူ ထောင်ချီသောင်းချီရောက်သွားတဲ့ MC Kayar Lay နဲ့ Rap Kyarkyiတို့ရဲ့ ယုန်လေးလုပ်ပေးခဲ့တဲ့ မိုးရေထဲမှာပဲ MTV MC ကယာလေးနဲ့ RAP ကျားကြီးတို့ရဲ့ MTV ကို ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင် အဆိုတော် ယုန်လေးမှ ဖန်တီးထုတ်လုပ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကိုယုန်လေးလှမ်းခေါ်တာကို ကြုံခဲ့ရတဲ့ သူတို့နှစ်ယောက်ဟာလည်း […]
စီးပွားတက်မယ့် အိမ်ဆိုတာ ..
အိမ်၏ ခေါင်းရင်းနေအိမ်သည် မိမိအိမ်ထက်မြင့်မည် ခြေရင်းအိမ်သည်လည်း မိမိအိမ်ထက်မြင့်ပါက ကိုယ်နေသောအိမ်သည် အမိုးနိမ့်နေလျှင် အိမ်ပုခက် ဟုခေါ်သည် ။ နေသောမိသားစုသည် စီးပွားတက်၏ ။ ကိုယ့်အိမ်ခေါင်းရင်းအိမ်က အမိုးနိမ့်မည် ။ ကိုယ့်အိမ်ခြေရင်းကလဲ အမိုးနိမ့်မည် ကိုယ့်အိမ်က အလယ်မှ အမိုးမြင့်မားနေပါက အိမ်မြင့်မိုရ်ဟုခေါ်သည် ။ လူကြီးမိဘတို့ကို ခေါင်းရင်းဘက်ထား၍ […]
မွေးရပ်မြေက ရပ်ဆွေ ရပ်မျိုးတွေကို တစ်ဦးလျှင် (၂၀၀၀၀) နှုန်းနှင့် သိန်းပေါင်း ၅ ထောင်ကျော် လှူဒါန်းလိုက်တဲ့ မိုးကုတ်ကျောက်သူဌေးကြီး
မိုးကုတ်မြို့ ရတနာရှင်ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင် ဦးအောင်စိုးဦး မိသားစု မှမိဘများရဲ့ မွေးရပ်မြေမှာ တစ်ယောက် နှစ် သောင်းနုန်းနဲ့သိန်းငါးထောင်ကျော်လူဒါန်းမိုးကုတ်မြို့ ရတနာရှင်ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင် ဦးအောင်စိုးဦး မိသားစု မှမိဘများမွေးရပ်မြေ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး အရာတော်မြို့နယ် မန်းကျည်းစောက်ရွာကို တစ်ယောက် ၂၀၀၀၀ိ/နှုန်း နဲ့သိန်းပေါင်း ၅၀၀၀ိ/= သိန်းငါးထောင်ကျော် လှုဒါန်းမှု့များပြုလုပ်သွားပါသည်။ နတ်လူသာဓုခေါ်စေသော် မိုးကုတ်မြို့ ရတနာရှင်ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင် […]
အခုညနေ၄:ဝဝနာရီမှာဖြစ်သွားတာ သာကေတCapital မှတ်တိုင်နားမှာလူတစ်စုကအတင်းခေါ်နေတာတွေ့တယ်။အခုမြင်နေရတဲ့အမျိုးသမီးကကြောင်ပြီးလက်စွပ်တွေ ဆွဲကြိုးတွေချွတ်ပေးလိုက်ပြီးနောက်တော့ရဲလာတယ်ဆိုပြီးထထွက်သွားမှသူသတိရတာနဲ့တူတယ် ကျမဆွဲကြိုးနဲ့လက်စွပ်ပြန်ပေးပါဆိုပြီးငိုနေတယ် ။ ဓာတ်ပုံထဲကလူတွေပါဘဲ သူတို့ကငြင်းနေတယ် ပြည်သူအများလည်းသတိထားကြပါ။ သည်လိုလူလိမ်တွေကိုအခုတလောခဏခဏတွေ့နေရတယ်။တို့ဆေးလားဘာလားတော့မသိဘူး —ထားပါတယ် အများပြည်သူလူခြုံရေးအတွက်ဒီpostကိုရှယ်ပေးကြစေလိုပါတယ် လူဆိုးတွေအတွက်လည်းနေရာကကျဉ်းသွားအောင်ပါ။ တစ်နေ့တည်းမှာဒီအမျိုးသမီးကတတိယမြောက်အလုခံရတာပါ ။ပထမအလုခံရတာကုလားမကြီးပါ။ဒုတိယအလုခံရတာကကောင်မလေးတစ်ယောက်ပါ သူတို့နှစ်ယောက်လည်းဝတ်ထားတဲ့ရွှေငွေတွေအကုန်ပါသွားတာပါ အများပြည်သူအားလုံးဘေးအန္တရာယ်ကင်းစေဖို့တွက်ဝိုင်းဝန်းပေးကြပါလို့တောင်းဆိုပါရစေဒီကိစ္စသိသူများလည်းသိသလောက်commetမှာမျှဝေပေးကြပါ ။ရှယ်ပေးကြပါ သာကေတ ၁၀၈ တောင်ဘုရားနားမှာလည်းလုပ်စားပါတယ် သာကေတကက်ပီတေနားတော့၂ရက်တစ်ခါလောက်လာတတ်တယ်လို့သိရပါတယ် သူတိုအဖွဲ့က လူ၁၅ယောက်လောက်ပါတယ် အနားကသူတွေသိပေမယ့်မပြောရဲကြပါဘူး […]
ရနျကုနျမွို့၊ သာ​ကတေ အ​နျော​မာ ၅လမျး အ​ရှသေံ့သယလူနာပါ ….
အဘ ဆန်ဝေနေတာ သွားမယူဘူးလားဆိုတော့….ငါ့ကို စာရင်းမပါဘူးတဲ့……
ဧရာဝတီ ဖောငျဒေးရှငျးမှ ဆနျအိတျ စုစုပေါငျး (၁၆၅၀၀)အား လိုအပျနသေူမြားအတှကျ လှူဒါနျး ….
မွန်ပြည်နယ်မှာ Quarantine လုပ်ထားသည့် ပြည်တော်ပြန်များ ထဲမှ ယနေ့ (၃)ယောက် သေဆုံ
ကပ်ရောဂါ စောင့်ကြည့်ခံပြည်သူတွေကို သီဆိုဖျော်ဖြေနေတဲ့ ရဲတပ်သားတစ်ဦး……